China 30g 50g 100g 250g 500g tsy misy kapoaka firy kavoara 8oz miaraka amina ozinina sy mpanamboatra fehikibo | Byland
30g 50g 100g 250g 500g tsy misy kapoaka firy caviar 8oz misy fehikibo
Description: Vata vita amin'ny caviar misokatra mora, Vata vita amin'ny caviar vacuum, vata fandraka kaody banga
Size: Ny savaivony sy ny hahavony dia azo ovaina araka ny fangatahanao.
Fampiasana: famonosana kaviara sns.
Akora: Tinplate matevina 0.23mm, misy hateviny hafa.
Vata vita amin'ny caviar misokatra mora, Vata vita amin'ny caviar vacuum, vata fandraka kaody banga
Ny savaivony sy ny hahavony dia azo ovaina araka ny fangatahanao.
famonosana kaviara sns.
Tinplate matevina 0.23mm, misy hateviny hafa.
Maherin'ny an'arivony mihoatra ny an'arivony.
Kitapo 1 / PP, faritra vitsivitsy / Carton ivelany.(Talantalana atody, tsara ny atiny raha mila)
1. Takatra ny volavolan'ny mpanjifa sy ny takiana.
2. endrika sy haben'ny fanamafisana tin.
3. Famaranana ny famolavolana.
4. Fanontana asa tanana ho an'ny santionany.
5. Fanamafisana ny santionany vita pirinty.
6. Fandaminana famokarana.
Manam-pahaizana manokana amin'ny fanaovana boaty firaketana fanomezana, boaty firapohana dite, boaty firaketana vita amin'ny boaty, boaty fanitso vita amin'ny vokatra ara-pahasalamana, boaty fanitso fanafody, boaty firakotra volom-boankazo, ary fonosana vy hafa vita amin'ny tin.
1. F: Mila avata-kaviara afaka somary avo kokoa / lehibe noho ny haben'ny tahirinao. Mora ve izany?
A: Miankina amin'ny fananganana tinitra no ahafahantsika manova ny haavon'ny ankamaroan'ny vina boribory na be tarehy mora foana miaraka amina fitaovana efa misy ho an'ny lamina manokana. Tins tsy misy siny na sarina dia mitaky fitaovana vaovao ho an'ny fanitsiana habe. Izahay dia manavao hatrany sy mampiasa vola amin'ny teknolojia farany izay hanome safidy bebe kokoa ho an'ny mpanjifanay.
2. F: Inona ny fotoana fitarihanao mahazatra ho an'ny fanao caviar firapotsy?
A: 3-5weeks miaraka amin'ny fitaovana efa misy sy ny kanto misy anao. Miaraka amin'ny fizotrany rehetra eo ambanin'ny tafo iray ka hatrany amin'ny famitana dia afaka manolotra fifehezana izahay ary koa fanalefahana ary fandefasana ara-potoana ho an'ny mpanjifanay.
3. F: Firy maraina aho no mila manafatra antoka fa hahazo ny fako ahocaviar Tins ara-potoana amin'ny fialantsasatra?
A: Mamporisika anao izahay hanomana mialoha araka izay tratra. Ny serasera no lakile! Raha misy fe-potoana tokony hohajaina amin'ny baiko manokana dia ampahafantaro ny solontenan'ny mpivarotra anay ny fizotry ny fotoana. Azontsika atao ny miverina manomboka amin'ny daty fandefasana ary manome fandaharam-potoana amin'ny fahazoana ny baiko mividy, ny sary ary ny fankatoavana ny porofo. Toy ny tetik'asa mahazatra rehetra, ny fanovana dia mety hanemotra ny fandefasana farany ny kaomandinao. Ho an'ny fotoana fitarihana amin'izao fotoana izao mailaka aminay na miantso ny 0755-84550616 ary miresaka amin'ny Representative Sales.
4. F: Azo antoka ve ny vata-kaviara ho an'ny vokatra sakafo? Afaka mahazo taratasy milaza nycaviar tsy misy atiny ve ny sakafo amin'ny tine?
A: Tavo caviar dia fonosana ekena ho an'ny vokatra sakafo. Azontsika atao ny manolo-kevitra ny firakotra anatiny ho an'ireo vokatra misy asidra na miorina amin'ny rano ireo. Mampiasa ny inks sy ny coating efa nankatoavin'ny FDA izahay ary afaka manome antontan-taratasy avy amin'ireo mpamatsy anay. Izahay dia voamarina isan-taona avy amin'ny mpanjifa Fortune 500 maro ary voamarina fa mahafeno ny fenitra avo lenta ho an'ireo mpanamboatra fonosana mifandraika amin'ny sakafo. Ny fitaovanay rehetra dia SQF2 voamarina avy amin'ny Safe Quality Food Institute.
Manangona santionany maimaimpoana, vidin'ny irakiraka.
Mampanantena ny hanafina ny sary famantarana sy ny sary nataonao izahay.
Raha mametraka kaomandy ianao dia azafady jereo eto ambany ny lisitra momba ny MOQ sy ny habeny samihafa.
Previous: 15g-30g-50g-125g-250g vata-kazo caviar vata vita amin'ny vatan-kazo mihidy
Manaraka: 250g sy 500g vano fisintonana mora caviar Tin Can_Ring
250g sy 500g mora misokatra Caviar Tin Can_Ring pul ...
15g-30g-50g-125g-250g vata boaty caviar tin ...